Ogaden News Agency (ONA) – Shacabkii uu soo barakicyay KT Meles oo ku faraxay geeridiisa iyo Cabdi iley oo la aamusiin la’yahay
Shacabkii uu soo barakicyay KT Meles oo ku faraxay geeridiisa iyo Cabdi iley oo la aamusiin la’yahay
Shacabka S.Ogadenia ee ku kala nool dunida dacaladeeda oo 2ba ciidood -asaaskii Jabhadda iyo Ciidul fidri- ay markii ugu horeysay isugu soo aadeen ayaa 21kii loo sheegey in dhiigyacabkii Ogadenya KT Zanawi uu bakhtiyay. Subaxnimadii shalay ayay warbaahinta ku hadasha afka gumaysiga Itoobiya shaaciyeen dhimashada KT Meles. Waxay arintaasu u ahayd shacabka S.Ogadenia ee dunida ku nool gaar ahaan kuwa xeryaha qaxootiga Kenya ku nool maalin wayn oo farxadeed waxayna isku salaamayeen inay u tahay maalin farxad leh, hadal haynta ugu badana waxay ahayd ma maqashay inuu dhiigyacab Zanawi bakhtiyay?
Halkan ka dhagayso madaxa haya’adda -Justice For Ogaden- oo idaacadda Radio France ay wareysatay.
listen to ‘Reaction to #Meles' death – interview Sigae Abde Ali, Justice for #Ogaden, civil society group’ on Audioboo
Meesha Cabdi Iley ay Itobiyaankii aamuseen kari waayeen. Sida ka muuqata filimada laga soo duubayna ay isaga iyo Berket Simon ku tartamayay cod dheerida iyo ilin hoorinta.
Hadaba warbaahinta ONA qaybteeda ka hawl gasha xeryaha qoxootiga ayaa u kuur gashay sida ay dadwaynaha S.Ogadenya u arkaan geerida Males Zanawi. Wariyayaasha ONA ayaa bulshada qaybaheeda kala duwan wax ka waydiisay fikirkooda ku’aadan geerida dhiigayacab Zanawi, waxayna dhamaantood isku raaceen in ay ku faraxsan yihiin dhimashadiisa, iyagoo sheegay in dhibaatooyinka uu u gaystay Zanawi aan la soo koobi karin, waxayna sheegeen inuu ahaa ninka uu ka dagi la’aa Geeska Africa, gaar ahaan Somaliya, isla markaana ka soo barakiciyay dalkoodii.
Dadka aan wax waydiinay waxaa kamid ahaa Axmad tahriib oo ka mid ah qoxootiga ku nool xerada Dhagaxlay wuxuuna yidhi; “Ugu horayn waxaan ku farax sanahay dhimashada ninkaan dunida ugu necbaa, waxaanan umada reer Ogadenia leeyahay hanbalyo waxaanan rajaynayaa guul dag-dag ah inshaa allaah.”
Waxaan sidoo kale aan wax ka waydiinay Maxamad Cali oo isna ku nool Dhagaxlay oo yidhi; “Geerida dhiigyacab Zanawi waan uga hanbalyeeynayaa umada ree Ogadenia, marka xiga waxaan u arkaa inuu ahaa shakhsi dhibaato badan ku hayay shacabka Ogadenia oo ku tala jiray inuu ka tirtiro khariirada Geeska Afrika. Waxaan ku faraxsanahay in uu illaahay ciqaabtiisii soo dadajiyay iyadoo uu shacabka reer Ogadenia na marayo meeshii ugu fiicnayd, waxaana leeyahay shacabka reer ogadenia gumaysiga gabalkiisii baa dhacaye aan israacino.”
Intaan dadwaynaha makarofanka la dhax maraynay waxaa noogu yaab badnayd wiil da’diisa noogu sheegay 8 jir oo ka mid ahaa koox ciyaal ah oo ku dhawaaqaysay Males dhimay, Ogadenia ha xorowdo. Maxaan waydiiyay; adeer yaa dhintay? Wuxuuna iigu jawaabay dhiigyacabkii Malis Sanawi. Oo maxaad ugu faraxsan tihiin geeridiisa ayaan waydiiyay? Wuxuuna yidhi wiilkii yaraa; Waa ninkii wadankaanagii naga soo eryay ee dadkaanagiina laayay.” Markaan sii wareystay wiilkii wuxuu ii sheegay in gurigoodii oo kuyaalay dagmada Dhanaan ay qaateen ciidamada Itoobiya.
Sikastaba ha’ahaatee dadka reer ogadenia ayaa dhamaantood maanta hadal hayay dhimashada KT Zanawi, goobaha laysugu yimaadana waxaa lagu lafagurayay dhibaatooyinka uu u gaystay shacabka Ogadenya Males Zanawi iyo waxa la filayo inay ku dambayn doonto siyaasadda Itobiya.